Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyaadka Ogadeniya ee Koonfurta Afrika oo hambalyo iyo Taagero u diraya Jabhada ONLF
Jaaliyaadka Ogadeniya ee Koonfurta Afrika oo hambalyo iyo Taagero u diraya Jabhada ONLF
Shir ay isugu yimaadeen xubnaha jaaliyada ogaadeeniya ee Koonfur Afrika oo xarunta jaaliyada ee magaalada Uitenhage lagu qabtay shirka oo ku soo aaday xili xaasaasi ah.
Shirka oo sidii caadada ahayd lagu furay wacdi qiimo badan oo uu soo jeediyay Shariif Xasan ayuu sheekhu ku booriyay dadkii dhagaysanayay cabsida Alle in ay tahay mida kali ah ee guul aakhiro iyo mid aduunba lagu gaadhi karo.
Waxaa sidoo kale warbixin dheer oo ku saabsan xalada Ogaadeeniya iyo guud ahaanba Geeska Afrika ka soo jeediyay gudoomiyaha JOKA mudane Bashiir Muxumed. Wuxuu gudoomiyuhu ku xeel dheeraaday dhaqanka Ethiopia oo ah mid soo jireen ah oo isu wada eg. Wuxuu daaha ka qaday sida ay Itobiya u burisay jaartarki (transitional charter) 1991 lagu heshiiyay taaso u dhiganta sida ay u buriyeen hadda shuruudihii wadahadalka ay saxiixeen bil ka hor. Arintan waxay noqotay mid u markhaati furta JWXO oo horay u sheegtay in aysan Ethiopia marna daacad ka noqonaynin in si waafaqsan sharciga caalamiga ah loo wada xaajoodo.
Sidoo kalle waxaa shirka isna kasoo jeediyay qudbad taariikhi ah hogaanka arimaha bulshada mudane Daahir Axmed oo ah rugcadaa ku xeeldheer taariikhda Ogaadeeniya. Wuxuu hogaanku qudbadiisa ku soo qaatay taariikhh kooban oo dhaxal gal ah oo uu sheegay xiligi 1992 sidi loogu guulaystay siyaasadii Ogaadeeniya ee Tigreegu majaro habaabinayeen. 1995 wadahadlkii beenta ahaa ee ay Itobiya doonaysay in ay shacabka ku majara habaabiso JWXO na ay ku fahantay ayay miiska u soo fadhiisatay 1998 oo isna lamid ahaa un kuwii hore. Hadda shirkii ka socday Nairobi waxay doonayeen in ay dalfiyaan halganka xaqa ah ee ay ONLF hormuudka katahay.
Waxaa kaloo goobta ka hadlay hogaanka Arimaha bulshada ee OYSU Eastern Cape halgame Cabdiraxman Saciid oo isna ku dhiiri galiyay xubnaha in ay laba jibaaraan halganka loona dhag raricinin tabaha liita ee cadawgu maleegayo.
Waxaa meesha ka maqnaanin oo gabay qiimo badan oo aad loogu riyaaqay shirka kasoo jeediyay mudane abwaan Khadar Colaad oo isagu goob kasta diyaar kula ah in uu xikmadiisa ku cabiro guubaabada iyo kicinta dadka.
Ugu danbayntii waxaa ka soo baxay shirkii bayaan si wadajir ah la’isugu raacay oo ka kooban;
Jaaliyada ogaadeeniya ee Koonfur Afrika JOKA
Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya OYSU S.A
– Waxaan hanbalyo iyo bogaadin u diraynaa madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya gaar ahaan gudidii wada xaajoodka oo uu oogu horeeyo mudan Cabdiraxmaan sh Mahdi (maaday) go’aanka geesinimada leh ee ay ka qaateen khiyaamadii ay maleegayeen wax magaradka indhaha iyo dhagaha la, ee habawga ah.
– Waxaan salaan iyo hanbalyo diiran u diraynaa dawlada Kenya oo uu oogu horeyo madaxwaynaha Mowi Kibaki, dadaalka dheer e ay u galeen in xal loo helo colaada dheeraatay ee qarniyada ka jirta ogaadeeniya.
– waxaan baaq u diraynaa shacabka ogaadeeniya meel uu joogaba in ay u diyaar garoobaan hanashada xoriyadooda oo maanta cadawgoodii uu yahay mid liita dhinacna qaban la in la sadex laabo dadaalkii iyo tageeradii halganka.
– Waxaan baaq u diraynaa beesha caalamka in ay meesha ka baxday in Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya diidan tahay xal u helista qadiyada Ogaadeeniya taas oo maanta loo wada jeedo in ay JWXO tahay mida ogol wada xaajood masiiri ah raadinayaana xaqoodii kana turjumayaan shacabka lahaysto ee ogaadeeniya daga isla amrkaana lo baahan yahay in Ethiopia talaabo ku aadan beesha caalamku kaqaadaan taas oo lagu joojinayo kumayaalka ay kuhayso laynat, xabsiga, dhaca, kufsiga qaxa lana raadiyo xal dhab ah
– Waxaan baaq u diraysaan saxaafada ku hadasha afka soomaaliga in buunbuunintii cadaga iyo beentii ay dhamaatay cadawguna fashilan yahay in ay ka tanaasulaan garab istaaga ay cadawga garab taagan yihiin cadeeyaana qaxiiqada oo maanta caalamku u jeedo.
Jaliyaadka ogadenia ee:
Warmurtiyeed: xafiiska iskuxidhka Jaaliyaadka Ogadenia ee Koonfurta Africa